आफ्नैले पनि साथ छोडे, साथ दिनेले कुरा मोडे – अफ्ठे’रोमा ओली ! – yuwa Awaj
कार्तिक २६, २०७७ बुधबार 3
Prevमध्यभोटेकोसीमा पनि कुलमान घिसिङलाई हटाएर शाक्यलाईनै ल्याइएको थियो !
Nextसुन्तला खानुको १० फाइदाहरु…हेर्नुहोस् ।
शुल्क लिन नपाउने भएपछि बैंकहरुले एटीएम बुथमा पैसा हाल्न छाडे, राष्ट्र बैंकसम्म पुग्यो गु’नासो…हेर्नुहोस् ।
बधाई ! नेपाली सेफ सन्तोस साह बीबीसीको मास्टर सेफ प्रतियोगिताको फाइनलमा…हेर्नुहोस् ।